I-Tourmaline ibhande ngumkhiqizo ohlukile ohloselwe ukuthatha izinyathelo zokuzivikela nokuthuthukisa impilo yomuntu. Ukusetshenziswa kwalesi sikhungo kusiza ukubuyisela amandla omzimba womzimba ngaphandle kokusebenzisa imithi enomphumela omubi endleleni yokugaya ukudla. Inzuzo enkulu yebhande ngumsebenzi wayo wokuzimela. Akudingi ukuvuselelwa. Ngaphezu kwalokho, ukusebenzisa leli thuluzi kungenziwa noma kuphi.
Ibhande le-Tourmaline ngumkhiqizo oyingqayizivele. Indwangu ekhethekile isetshenziselwa ukukhiqizwa kwayo. Ihlanganisa izintambo ezikhethekile ezihlanganiswe nama-nanocrystals e-tourmaline. Ngaphezu kwalokho, ukuze kuthuthukiswe umphumela we-physiotherapeutic, izakhi ezinokufakelwa kwamagneti aphansi zisetshenziselwa ukwakha ibhande . Zitholakala endaweni yokusebenza yomkhiqizo.
Ibhande le-Tourmaline linomthelela ombili emzimbeni womuntu. Ithuluzi eliyingqayizivele lidala i-piezoelectric kanye nomphumela we-thermoelectric. Kule nkinga, ibhande lithola inani elikhulu ngokwanele lamapulangwe angama-longred wave and ions negative, ewusizo empilweni. Lapho uxhumana namagnethe, idatha ye-radiation idala amandla ephezulu kagesi .
Ibhande le-tourmaline liveza ukushisa uma lihlangana namanzi. Kungaba umswakama noma i-sweat eyimfihlo ebusweni besikhumba ngesikhathi sokuhamba komuntu. Phakathi nesikhathi sokulala, akukho ukushisa okwenzekayo, kodwa ngalesi sikhathi umphumela wamagesi asezindlela eziyingqayizivele awuncishisiwe.
I-Tourmaline ibhande, ukubuyekezwa odokotela mayelana nokufakaza komphumela omuhle emzimbeni, kuvumela:
- qinisa ukuvikelwa komzimba;
- ukuvamise ukusebenza kwemithi emzimbeni;
- phuthukisa ukugeleza kwegazi;
- ukunciphisa ama-syndromes ebuhlungu.
Ezitolo ezikhethekile ungathenga iqoqo lamabhande e-tourmaline. Ihlanganisa izifundo ezine. I-kit ihlanganisa ibhande elilodwa, elenzelwe ukwelashwa kwesinqe, i-pad elilodwa entanyeni kanye nambili okwesigqoko namalunga okuguqa.
Umkhiqizo oyingqayizivele wenzelwe labo bantu abangathandi amakhaza. Ibhande libuye lisebenzise futhi uma usebenza ngokweqile emisipha yesiqhwa. Ithuluzi eliyingqayizivele lisiza ukuqeda i-hernia ye-vertebrae yediski ye-lumbar ne-intervertebral. Ibhande likhonjiswa ngenxa ye-arthritis kanye ne-hyperstosis. Ukusetshenziswa kwalo kunconywa kubantu abahlanganyela ngokujulile emidlalweni.
Isikhathi sokuqala sokusebenzisa ibhande le-tourmaline sinconywa isikhathi esingaphezulu kwemizuzu eyishumi. Ngesikhathi esifanayo, umuzwa wokufudumala akufanele uhambe ngaphezu kwenduduzo. Kancane kancane, isikhathi seseshini singakhuphuka sibe amahora amathathu. Ukusebenza njalo kwebhande kukhuthaza umphumela wokuphumula emithanjeni ebushelelezi yazo zonke izitho zangaphakathi, okuthuthukisa igazi labo. Ngaphezu kwalokho, ukusebenzisa ithuluzi eliyingqayizivele kuvumela ukwandisa isibani semikhumbi, okwandisa ukuhlinzeka kwezitho nama-tissue nge-oxygen. Futhi ukugqoka i-tourmaline ibhande kuvumela ukusetshenziswa kwesistimu yezinzwa. Ukusetshenziswa komkhiqizo oyingqayizivele kufana nokugcoba, kanye nokusila.
Tonometer Omron M3 Expert: ukubuyekezwa, imfundo
I-DDT: yimuphi ukwelapha okudakayo futhi yiziphi izinkomba zenqubo
Zabesilisa perfume toilette: flavour engcono
Iholidi elihle kakhulu lomndeni wonke liyi-"Rainbow" ipaki yamanzi (i-Cherepovets)